फिल्ममा जयललिता बन्न २० केजी तौल बढाइन् कंगनाले Canada Nepal
फिल्ममा जयललिता बन्न २० केजी तौल बढाइन् कंगनाले
काठमाडौं - बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौत पछिल्लो समय एकपछि अर्को फिल्ममा व्यस्त भइरहेकी छिन् । मंगलबार कंगनाको नयाँ फिल्म 'थलाइवी' को ट्रेलर र नयाँ लुक सार्वजनिक भएको थियो ।
उनको जन्मदिनको अवसर पारेर 'थलाइवी' को ट्रेलर युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको थियो । जुन ट्रेलर दर्शकले निकै रुचाएका छन् ।
ए. एल विजयको निर्देशनमा बनेको यस फिल्ममा कंगनाले धेरै नै संघर्ष गरेकी थिइन् । उनले यस फिल्मका लागि २० केजी तौल बढाएकी थिइन् । उनले अभिनेत्री तथा तमिलनाडुकी पूर्व मुख्यमन्त्री स्वं. जयललिता बन्न २० केजी तौल बढाएकी हुन् ।
यस फिल्मको लागि उनी जे गर्न पनि तयार थिइन् । गर्मीमा पनि बाक्लो सारी लगाएकी थिइन् । अहिले उनको कामको प्रशंसा पनि भइरहेको छ ।
फिल्म 'थलाइवी' को ट्रेलर सार्वजनिक, देखाइयो कंगनाको अभिनेत्री करिअरदेखि राजनीतिसम्म पुग्दाका उतारचढाव
यस फिल्म मुख्यमन्त्री स्वं. जयललिताको जीवनीमा आधारित रहेको छ । यस फिल्म हिन्दी, तमिल र तेलुगू भाषामा निर्माण भएको छ । फिल्ममा कंगनासहित अरविन्द स्वामी, नसर, भाग्यश्री, राज अर्जुन लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । फिल्म २०२१ को अप्रिल २३ मा रिलिज हुनेछ ।
चैत्र ११, २०७७ बुधवार १२:१९:३५ बजे : प्रकाशित